Wararka - Badbaadada guddiga goynta balaastikada PE?
Goynta looxa qoys kastaa ma u baahan yahay nolol maalmeedka, hadda celceliska qoyska ayaa dooran kara alwaax jarista ama looxa goynta bamboo, dhab ahaantii, sida dadka si aad iyo aad u taxadar leh caafimaadka, PE-da looxa goynta, goynta block sababtoo ah dhadhanka aan sunta ahayn, waara, u adkaysta daxalka, fududahay in la nadiifiyo, adkaanta xooggan iyo sifooyin kale, noqo qoys iyo supermarket, sahayda hoteelka.
PE waa gaaban yahay PET (polyethylene terephthalate), taas oo ah waxa aan ugu yeerno dhowr walxood oo caag ah, walxaha noocan oo kale ah ayaa badanaa loo isticmaalaa in lagu sameeyo dhalooyinka biyaha, dhalada cabitaanka kaarboonaysan, dhalada cabitaanka looma isticmaali karo wareegga biyaha kulul, kulaylka walxaha ilaa 70 ℃, kaliya ku haboon cabitaanka diiran ama cabitaanka, dareeraha heerkulka sare ama kuleylku waa sahlan tahay in la beddelo, waxay waxyeello u geystaan ​​kala dirida walxaha jidhka bini'aadamka. Laakiin balaastiga goynta ah ee laga sameeyay PET (polyethylene terephthalate) waa sheeko ka duwan.
looxa goynta PE waxa uu ka samaysan yahay cufnaanta hoose ee polyetylen resin alaabta ceeriin ( caag heerka la cuni karo PE). Looxyada dhaqameed ee loo isticmaalo qoysaska Shiinaha waxay ka samaysan yihiin alwaax. Dhammaanteen waxaan aaminsanahay in alwaaxdu ay tahay mid dabiici ah, aan sun ahayn, aan waxyeello lahayn iyo deegaan caafimaad leh.Laakiin guddiga alwaaxdu sidoo kale waxay leedahay cilladaheeda, alwaaxdu ma aha oo kaliya ciriiri, laakiin sidoo kale waxay u nugul yihiin dildilaaca, wasakh, gaar ahaan ka dib marka la dhaqo qoyan, ma aha fududahay in la caajiso, noqo meel muhiim ah oo lagu dhalo bakteeriyada, sidaas darteed, hadda suuqa laga bilaabay dhammaan noocyada looxa balaastigga ah, guddiga PE-ga ayaa ka mid ah.
Miisaanka molecular oo sarreeya guddiga goynta polyetylen, guddiga goynta, guddiga goynta polyetylen miisaan sare ee kelli, daloolin, guddiga goynta, guddiga hilibka, mashiinka goynta goynta, dhammaan noocyada kala duwan ee mashiinka cuntada guddiga goynta, panel.This alaabta isticmaalaa heerka cuntada PE resin polyetylen. alaabta ceeriin ee la safeeyey, xoogga saamaynta sare leh, gaar ahaan heerkulka hooseeyo xoog saamaynta. Alaabta waa siman iyo translucent ee muuqaalka, sida dhuka.
1. Adayg sare iyo dhaawac tooray la'aan, biyo la'aan, bakteeriyada, caariyaysi la'aan, cimriga oo ka badan toban sano.
2. Dhadhan la'aan oo xor ka ah dheecaanka, gaar ahaan ku habboon cuntada, daawada iyo warshadaha kale ee u baahan xaaladaha nadaafadda sare
3.Stable guryaha kiimikada, inta badan ee aan organic, acid organic, alkali, milix iyo dareere organic ma daxaloobay in PE polyetylen.
4.Waxyaabahan si ay u
5. Alaabta Tani waxay leedahay adhesion wanaagsan oo aan aad u fudud in la nadiifiyo koollada dusha sare. Marka biyaha la nadiifiyo, waxay noqon karaan kuwo nadiif ah sida cusub.
6.Adayg dhexdhexaad ah, gooyn kartaa walxaha jarjaraya lafaha! Wax dhib ah ma la gooyn khudaarta hilibka la gooyay lafaha, iyada oo waqti dheer sidoo kale wax yar oo calaamado mindi ah, ma jiri doonto dharbaaxo, dildilaac iyo dhibaatooyin kale.
7. Cufnaanta hoose, miisaanka fudud.Si fudud in la xakameeyo oo la rakibo.
Marka la soo koobo, looxa goynta resin polyetylen PE ayaa ah doorashadaada.
Talooyin loogu talagalay isticmaalka guddiga goynta. Marka hore, ka dib marka dib loo iibsado, markii ugu horeysay ee lagu nadiifiyo, biyaha bariiska Amoy sida ugu fiican.Labaad, fiiro gaar ah u leh ilaalinta isticmaalka maalinlaha ah, waxaa lagu talinayaa in si siman loo daboolo dusha sare ee gooynta. looxa saliidda cuntada lagu kariyo si looga hortago in looxa wax lagu gooyo dillaaco.Saddex ayaa la isticmaalayaa, markii ugu horreysay ee la nadiifiyo, iyadoo la dhigay meel hawo leh oo qallalan, si looga hortago caariyaysi.
Waqtiga boostada: Oct-21-2021